Yangon Region 927
Engineering & Technical j... 396
286 Days, Full time , Distribution / Logistic
287 Days, Full time , Distribution / Logistic
288 Days, Full time , Education / Training
•	Meet monthly sales targets, as set by the sales Supervisor •	Ensure all KPIs are met that concern Sales, Student support and care •	Manage your diary ensuring that all necessary phone calls and appointments are carried out on time •	Provide reports relating to your activity and sales progress to Sales Manager & Centre Director •	Update the sales CRM in and accurate and reliable manner to ensure good contact management •	Attend meetings with Sales and Service team •	Act asaliaison between Student and the Service team ...
Job ads in Education, Childcare & Teaching jobs and in Mandalay Region
289 Days, Full time , FMCG
•	မျောတျောယာဉျပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြား ၊ အစိုးရ ရုံးပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားတှငျ ကောငျးမှနျစှာ စီမံခနျ့ခှဲ လုပျကိုငျဆောငျရှကျဖူးသူ ဖွဈရမညျ ။ •	စကျရုံနှငျ့ ပတျသတျသော Admin ပိုငျးဆိုငျရာ ကိစ်စရပ� ...
၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ရှမ်းရွှေတောင် ရှူးရှဲလက်ဖက်အား မြန်မာ့လက်ဖက် ဈေးကွက်အတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် သင့်တော်ညီညွတ်စေသော ထုတ်လုပ်မှုပုံစံဖြင့် စားသုံးသူများထံ ပထမဦးဆုံး အောင်မြင်စွာ FDA စစ်ဆေးထောက်ခံချက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုမှတဆင့် ဇယန်းလက်ဖက် ၊ ဂျင်းမွှေး ၊ နှစ်ပြန်ကြော် ၊ ရွှေဥကြော် စသည်တို့ကို ထပ်မံ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရောင်းချီရောင်းချခဲ့ပါသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လက်ဖက်စားသုံးသည့် အရောင်းဈေးကွက်တွင် အရောင်း ဈေးကွက်ရှယ်ယာ ၇၅% ဖြင့် ယနေ့အချိန်အထိ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်မှုရှိစေသော ခေတ်မီနည်းစနစ်များ ၊ ခေတ်မီစက်ကိရိယာ ထုတ်လုပ်မှု ပုံစံများဖြင့် အောင်မြင်စွာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျှက်ရှိပါသည် ။ ထို့နောက် ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီလီမိတက်ပုံစံဖြင့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အား ပိုမိုထိရောက်စွာ ရောင်းချလုပ်ကိုင်လျှက် ရှိပါသည် ။ အဆိုပါ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ဖက်လောကတွင် ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဥရောပ (EU)အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်ရ ‘‘ ပလိုင်း အော်ဂဲနစ် နှမ်းလက်ဖက် အနှစ် နှင့် နှမ်းလက်ဖက် အညွန့်” တို့ကို Premium Qualityအဖြစ် ပြည်တွင်း၌သာမက ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ထပ်မံ ထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါသည် ။ လက်ရှိ စက်ရုံတွင် နေ့စား ၀န်ထမ်း - ၄၀၀ ဦးရေ ၊ လခစာ ၀န်ထမ်း - ၁၀၀ ဦးရေ ခန့်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ ပေးအပ်ခန့်ထားနိုင်ကာ ၊ စားသုံးသူများအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်ကာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော ၊ ခေတ်မီနည်းပညာများဖြင့် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်တင်းရောင်းချပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားထုတ်လုပ် ရောင်းချလျှက်ရှိသည် ။ အဓိကအားဖြင့် ရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက်နှင့် ပလိုင်း(အော်ဂဲနစ်)လက်ဖက် ဟူ၍ (၂)မျိုး ခွဲခြားထုတ်လုပ်ရောင်းချလျှက် ရှိသည် ။ ရှမ်းရွှေတောင်လက်ဖက် ထုတ်ကုန်များမှာ ၁။ ရှမ်းရွှေတောင်-ရှူးရှဲလက်ဖက် ၂။ ရှမ်းရွှေတောင် - ဇယန်းအညွန့်နှပ် ၃။ ရှမ်းရွှေတောင်-ဂျင်းမွှေး ၄။ ရှမ်းရွှေတောင် - နှစ်ပြန်ကြော် ၅။ ရှမ်းရွှေတောင်-ရွှေဥကြော် မြန်မာ့နိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး EU အသိမှတ်ပြု Certificate လက်မှတ်ရ အော်ဂဲနစ်စစ်စစ် - ပလိုင်းလက်ဖက် Premium Standard ပလိုင်း အော်ဂဲနစ် လက်ဖက် ထုတ် ကုန်ပစ္စည်းများ - ၁။ ပလိုင်း-နှမ်းလက်ဖက်အနှစ်(အော်ဂဲနစ်) ၂။ ပလိုင်း-နှမ်းလက်ဖက်အညွန့်(အော်ဂဲနစ်) ၃။ ပလိုင်း - ပဲအစေ့အစုံကြော်
•	Daily Checking Cash Receipt and Payment Voucher •	Daily Operation, Analyse & report the data of expenditure and income •	Checking Fixed Asset Register with Excel •	Daily, weekly and monthly report to CA •	Preparing Month End Journal Entry for All Outlet & Warehouse •	Preparing Timely and Accurate Monthly Financial Statement (separately All Outlets) •	Controlling Expenses of Outlet , Stock Balance & Cost of Goods Sold
290 Days, Full time , Retail / Wholesale
•	Liaised with the architects and interior designers to use our products •	Main focus on tiles and paint •	Assist or participate in coming up with marketing strategies •	Understanding the product/design trends in project sites •	Able to write and present your analysis and thoughts in the reports given •	Collecting datas for both existing clients and potential clients •	Able to travel (preferred)
To be No.1 building materials trading company by distributing high-quality products. Our company strongly emphasizes on keeping good relations with our valuable customers, dealers, agents, suppliers, employees and other stakeholders continual improvement of the company.
Due to the growing demands and dramatic changes in purchasing behaviour of the consumers, our flagship retail store, Shwe Myitta Home Mart, was renovated in 2012 asaone-stop shopping place for interior decoration materials such as wall tiles, floor tiles, doors, sanitary ware and bathroom necessities. With appealing design, state-of-the-art facilities, bona-fide quality products and exceptional customer service by our gracious and courteous salespersons, we ensure that the customers’ satisfaction is our priority during their patronage.
Being founded by U Khin Maung Win and Daw Soe Moe Thu in 1990, Shwe Myitta Cement & General Trading, located at the heart of the building materials market of Yangon, Saw Bwar Gyi Gone, has been supplying various cement brands and steel materials over two decades. Since then, our wholesale distribution channels throughout the country have been growing substantially every year.
To satisfy the needs of consumers in the upper Myanmar, we branched out into Taunggyi market in 2013, followed by our newest showroom in Mandalay in 2015. In virtue of the sustainability of our quality management for products and services we provide over the years, our company is currently one of the most prestigious market leaders in Myanmar with over 300 employees andastrong distribution network comprising around 1500 shops throughout the country.
•	Mandalay ရှိ Shwe Myitta Home Mart Showroom တွင်အလုပ်ဆင်းရမည် •	Showroom သို့လာသော Customers များအား Shwe Myitta Trading Co., Ltd မှတင်သွင်းထားသည့် Product များ‌ကို သေချာရှင်းလင်း‌ရောင်းချပေးရမည် •	ရောင်းချ ပြီးသည့်ပစ္စည်းများကိုဂို‌‌‌ဒေါင်သို့ Official ကုန်ထ� ...
Assistance Chief Account
•	Lead and control all accounts and cash for company. •	Develop and maintain internal control and effective accounting system and policies for the setup •	Manage for any other financial work flow by BOD’s instruction. •	Handle full spectrum of financial and cost accounting role eg. AR, AP, GL, forecasting, budgeting, etc. •	Performing financial analysis and reporting to management as needed. •	Responsible for day to day finance and accounts operations •	Supervision the day-to-day operation of the accounting •	Analyze bu ...
291 Days, Full time , Trading